हैदरावाद हाउसमा ओली र मोदीले... :: चन्द्र काफ्ले :: Setopati
हैदरावाद हाउसमा ओली र मोदीले के भने?
छापाबाट नयाँ दिल्ली, चैत २५
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा नेपाल र भारतले १२ बुँदे संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन्। वक्तव्यमा तीन नयाँ समझदारी समेटिएका छन्। वक्तव्यको बुँदा नम्बर ९ मा कृषि क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने, रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्ग विस्तार गर्ने र जलमार्गबाट नेपाललाई जोड्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। आजको नयाँ पत्रिकामा छापिए अनुसार हैदारावाद हाउसमा दुबै प्रधानमन्त्रीले के-के भने?
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत २४, २०७४, ०७:२१:४०